guestbook | Holmbygden.se
မည်သည့်လိုင်းရေးနှင့် guestbook အောက်တွင်သင့်အမှတ်အသားချန်ထားမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်.
Guestbook Holmes ခရိုင်၏အများဆုံးသွားရောက်လည်ပတ်စာမျက်နှာများ၏ဧည့်သည်စာရင်းဇယားအောက်. သို့ရာတွင်ထိုသို့လည်းမကြာခဏတစ်စုံတစ်ဦးကတစ်စုံတစ်ခုရေးသားခဲ့သည်ဖြစ်ပါသည်. သင့်ရဲ့အသံကို!
တစ်ဦးမေတ္တာနှင့်ကြားလိုက်ပါ၏ Leave သို့မဟုတ်သင်စိတ်ထဲရှိတစ်ခုခုစဉ်းစားအဘယ်သို့ဆို!
ဂွန် Lundgren အပေါ် 12 ဇွန်လ, 2016 တွင် 13:51 ကပြောသည်:
ကျောင်းကစတင်ခဲ့သည်အထိ Holmbo နေရာထိုင်ခင်းÖstbynမွေးဖွားအဖြစ်, ငါ Holmes များအတွက်ပူခံစားရတယ်. ဆဲရွာ၌သူငယ်ချင်းများနှင့်အသိအကျွမ်းရှိသည်နှင့်ငါရှိရသည့်အခါသူကအိမ်မှာကဲ့သို့ခံစားရ. ဂွန်ကနေနှုတ်ခွန်းဆက်.
Rockabilly သူပုန်တွေ Sundsvall အပေါ် 30 မေ, 2015 တွင် 19:26 ကပြောသည်:
မင်္ဂလာပါ. Holmbygden. ရုံ Midsummer တွေ့ဆုံဒီနှစ်ဖြစ်ပျက်မည်မဟုတ်ကြောင်းအလေးအနက်ဖော်ပြချင်. ဝမ်းနည်းစရာဟုတ်တယ်ထင်. smear နှင့်အတူတစ်ခုခုကားမောင်းရပါမည်သူကိုစရှိသောအခါရှိသူများ, ထိုအပင်အမှုအရာနှင့် ပတ်သက်. အိပ်ရ, Ord.vakter ကစားပွဲ, စိတ်ခံစားမှု, etc. ထိုအခါကျွန်တော်တို့ကိုမဟုတ်ဘဲ Midsummer တွေ့ဆုံ Graven..Rockabilly သူပုန်တွေကိုတက်ရောက်ဖို့ပါစေ .
ငါတို့အဘို့အကျေးဇူးတင်နှငျ့သငျကျနော်တို့ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ကြသောအရာကိုထက်ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်စေခြင်းငှါ, ဒီခရိုင်အတွင်းရှိအခြားအရာတစ်ခုခုရနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်မဆို.Därmedမှုတ် / လှည့်စားရန်ရည်ရွယ်ဖူးဘူး
ROCKABILLY သူပုန် SUNDSVALL
ကျနော်တို့အဘို့ထိုသူတို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်2ကွရာသီ .
Holmbygden.se အပေါ်2ဇွန်လ, 2015 တွင် 23:22 ကပြောသည်:
Hej alla Rockabilly သူပုန်တွေ,
ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းအဖွဲ့များထံမှအလွန်ပျင်းစရာကောင်းခဲ့ (!) အတွင်းကအကြောင်းစကားကိုနားထောငျဖို့အတန်ငယ် Holmes အတွက် Midsummer တွေ့ဆုံဖြစ်ပါသည်. သင့်ရဲ့ပုံပြင်ကိုနားထောငျဖို့ဝမ်းနည်းဖွယ်. ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ကြောင့်ကျေးလက်အားလုံးကိုဧည့်သည်များနှင့်အတူအစီအစဉ်နှင့်ပျော်စရာနှင့်အတူအလွန်တန်ဖိုးထား iniative ခဲ့သည်.
လီနာNäslund အပေါ် 15 ဧပြီလ, 2015 တွင် 18:14 ကပြောသည်:
တစ်ခုချင်းစီကိုတဦးတည်းဥပမာအားဖြင့်တညဉ့်ကိုင်နိုင်? ရိုးသားစွာလီနာ superlina84@hotmail.com
Sören Olofsson အပေါ် 14 ဒီဇင်ဘာလ, 2013 တွင် 12:36 ကပြောသည်:
Holmbygden.se အပေါ် 16 ဒီဇင်ဘာလ, 2013 တွင် 10:01 ကပြောသည်:
ခရီးဝေးဧည့်သည်များတန်ဖိုးထားကြားနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ site ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်အလွန်ရယ်စရာ!
ကားလ် Blomberg အပေါ် 26 ဧပြီလ, 2012 တွင် 08:30 ကပြောသည်:
ယခုတွင်သင်သည်လည်း Holmes ခရိုင်အားလုံးကို entry ကိုရမှတ်အနည်းဆုံးဆိုင်းဘုတ်များအသုံးပြုပုံဥပမာ URL ကို advertise ရမယ်.
Holmbygden.se အပေါ် 26 ဧပြီလ, 2012 တွင် 14:35 ကပြောသည်:
မှန်ပါသည်, စိတ်ကူးနှင့်ငါတို့ကိုလုပ်ကြံလိုက်ပါတယ်. ဒီတော့ဝေးသို့သော်အရာ၏အဘယ်သူမျှမကြင်နာလုပ် – အလုပ်တစ်ခုလည်းတစ်စုံတစ်ဦးကဖန်ဆင်းခံရဖို့… ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်စျေးကွက်မှကူညီပေးသည်သောသူအပေါင်းတို့သည်တိုင်အောင်အပျော်ရွှင်နေကြသည်, ဒါကြောင့်ဝေးကသာယေဘုယျအတွက်ကြပါစေယင်းနှင့်အင်တာနက်မှတစ်ဆင့်ပြန့်နှံ့သည်ကို ထောက်..
/Niklas Wikholm, Webmaster
Skåneပေတရု Lindeberg အပေါ်6ဖေဖေါ်ဝါရီလ, 2012 တွင် 11:45 ကပြောသည်:
ဒါဟာ Holmes ခရိုင်ကနေအသစ်ကအင်တာနက်ကို site ပေါ်တွင် Ulla Lindenberg မှာအီးမေးလ်တစ်စောင်ရဖို့ကြီး. အရေးအသားအပေါ်နောက်ဆုံးရသတင်းယဇ်ပုရောဟိတ်တဲ့ Carl-Heinrich Smuzzler ထံမှမဟုတ်ရင်ငါ့အဘို့ကိုအဓိကအားထား (စာလုံးပေါင်း excuse) သူ fastidiously စက်ရုံစျေးနှုန်းများနှင့်အတူအက္ခရာများစတင်သောအခါအ “Nix Pix” နှင့် “အခမဲ့ကော်စတာ”. အရွက်တစ်ခုလုံးကိုခရိုင်အကြောင်းကိုဖတ်ရှုဖို့အလွန်ကောင်းတဲ့ခဲ့ကြသည်. ထို့ကြောင့်, ငါမေးလ်များစွာကိုဤအမျိုးရန်မျှော်လင့်.
ယခုတွင်ငါသည် subscribers တွေနဲ့ပူးပေါင်းတဲ့အကြီးအ်ဆိုက်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
ကိုယ့်Anundgård Vikholms ထံမှပတေရုသချိန်းတွေ့
Roland Hultman အပေါ် 12 ဇန္နဝါရီလ, 2012 တွင် 08:56 ကပြောသည်:
စိတ်ဝင်စားနေသောကျွန်တော်တို့ကိုအဘို့ဤစီမံခန့်ခွဲသူကိုသင်တို့ဆီသို့ Kudos, သင်ဤပြီးမြောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့အကူအညီရမျှော်လင့်ပါတယ်.
Holmes ခရိုင်ငါ့ထက်ငါ့အကိုပိုမိုစဉ်အတွင်းခဲ့ဖူးတဲ့အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည် 60 – တစ်နှစ်ဘဝဤမျှဝေးနှင့်ဖြစ်ကောင်းဒီတော့ဆက်လက်တည်ရှိဦးမည်….
Niklas အပေါ် 30 နိုဝင်ဘာလ, 2011 တွင် 18:41 ကပြောသည်:
သင်ဒီမှာကျေးလက်ဒေသအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုနှိမ့်ချထားသမျှသောအမှုအ HBU ကျေးဇူးတင်ပါသည်! =)
#31 = သစ်ကို guestbook feature ကိုစမ်းသပ်)
အကြောင်း HOLMBYGDEN.SE ကျသကေို ဒီမှာ
အလွယ်သုံး / Latest News:
Holmes Fiber - အချက်အလက်နှင့်မှတ်ပုံတင်ရေး
နှင်းလျှောစီးအပုဒ်ဈAnundgård / ဗိုက်ကင်း
- သတ္တုရိုင်း Properties ကို / Håkan Larsson Bilkonsult / ထစွမ်းအင်ကြေညာချက်များ
ပိုပြီး: အရှုပ်တော်ပုံအိမ်များ / ခိုလှုံခွင့်နေထိုင်ရန်.ပိတ်.
23/5: 200 Holmes မှရှာဖွေနေသူ ...
15/8: ရွှေ့ပြောင်းဘုတ်အဖွဲ့: အဘယ်သူမျှမခိုလှုံခွင့် ...
16/3: ရွာသားများ '' စိုးရိမ်ပူပန်မှုများစစ်မှန်တဲ့သို့ရောက်လာသည် ...
30/1: သတိ! ထနေရာအရပ်ရပ်ကိုဝယ် ...
12/12: kvarläအပေါ် Holmes အတွက် Mittnytt ...
11/12: SR: အလုပျသမား left ...
26/11: ထဥယျာဉ်စောင့်ကိုထုတ်ပစ် ...
21/11: ဆန်းစစ်ခြင်းဥပဒေပြဌာန်းထားသည်ကိုကြည့်ပါ ...
20/11: SVT ထပြန်လည်သုံးသပ် ...
12/11: တီဗီထဲမှာ "မြွေပူရာကင်းအိမ်များ" ...
11/11: သင်္ဘော MV: အဘယ်သူမျှမခိုလှုံခွင့်နေရာထိုင်ခင်း ...
10/11: Hamberg inblan ငြင်းပယ် ...
7/11: Sundsvall ၏ S ကို asylb လက်ခံရရှိ ...
25/10: ဝေဖန်အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုများကို ...
17/10: ထစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန. မီးအောက်မှာ ...
14/10: Stendahl နှင့်အတူ links ...
10/10: ထ Migrationsv မှလိမ် ...
9/10: မီဒီယာမော်နီတာ skandalhus ...
4/10: ရွှေ့ပြောင်းခြင်းဘုတ်အဖွဲ့စစ်ဆေးခြင်း ...
17/9: 156 Holmes ရှိ "အရှုပ်တော်ပုံအိမ်များ" ကိုခိုလှုံခွင့်တောင်းခံ!?
တစ်ဦးကပို့စ်ရေးဖို့ / IN နောက်ထပ်ဖတ်ရန်
ကျေးလက်ဒေသ Holmes သတင်း
17/3: နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးကို Holmes FVO
3/3: vindkr ၏ဆောက်လုပ်ရေး ...
2/3: Österströmsပြရန် ...
28/2: ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခြင်းအပေါ် SVT အစီရင်ခံစာ ...
အဆိုပါသတင်း widget ကမှယခင်သတင်း လကိုရွေးချယ်ပါ မတ်လ 2019 (5) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2019 (3) ဇန္နဝါရီလ 2019 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (1) အောက်တိုဘာလ 2018 (1) စက်တင်ဘာလ 2018 (4) သြဂုတ်လ 2018 (1) ဇူလိုင်လ 2018 (5) ဇွန်လ 2018 (6) မေ 2018 (6) ဧပြီလ 2018 (2) မတ်လ 2018 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (2) ဇူလိုင်လ 2017 (2) ဇွန်လ 2017 (1) မေ 2017 (4) ဧပြီလ 2017 (2) မတ်လ 2017 (4) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2017 (4) ဇန္နဝါရီလ 2017 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (2) နိုဝင်ဘာလ 2016 (1) စက်တင်ဘာလ 2016 (4) ဇွန်လ 2016 (5) မေ 2016 (5) ဧပြီလ 2016 (3) မတ်လ 2016 (6) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2016 (4) ဇန္နဝါရီလ 2016 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (3) နိုဝင်ဘာလ 2015 (4) အောက်တိုဘာလ 2015 (1) စက်တင်ဘာလ 2015 (5) သြဂုတ်လ 2015 (4) ဇူလိုင်လ 2015 (4) ဇွန်လ 2015 (3) မေ 2015 (7) ဧပြီလ 2015 (4) မတ်လ 2015 (4) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2015 (4) ဇန္နဝါရီလ 2015 (8) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (3) နိုဝင်ဘာလ 2014 (4) အောက်တိုဘာလ 2014 (5) စက်တင်ဘာလ 2014 (3) သြဂုတ်လ 2014 (4) ဇူလိုင်လ 2014 (2) ဇွန်လ 2014 (6) မေ 2014 (5) ဧပြီလ 2014 (8) မတ်လ 2014 (11) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2014 (4) ဇန္နဝါရီလ 2014 (7) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (12) နိုဝင်ဘာလ 2013 (12) အောက်တိုဘာလ 2013 (10) စက်တင်ဘာလ 2013 (9) သြဂုတ်လ 2013 (15) ဇူလိုင်လ 2013 (13) ဇွန်လ 2013 (18) မေ 2013 (17) ဧပြီလ 2013 (13) မတ်လ 2013 (11) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2013 (7) ဇန္နဝါရီလ 2013 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (9) နိုဝင်ဘာလ 2012 (9) အောက်တိုဘာလ 2012 (6) စက်တင်ဘာလ 2012 (10) သြဂုတ်လ 2012 (10) ဇူလိုင်လ 2012 (4) ဇွန်လ 2012 (11) မေ 2012 (10) ဧပြီလ 2012 (4) မတ်လ 2012 (7) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2012 (6) ဇန္နဝါရီလ 2012 (3) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (3)
Holmes IDE BOX
မိုးလေဝသသတိပေးချက်များ (SMHI, SR):
9/2: utah: သတိပေးခြင်းလူတန်းစား 1, နှင်း, V ကို ... စနေနေ့လုပ်နိုင်တဲ့ဃအပေါ်တစ်နေ့တာအတွင်း ... ဆက်ဖတ်ရန်
22/3: Sundsvall (ဝတ်မှုန်)
Höga halter av alpollen i luften.
11/2: ပထမဦးဆုံး: D ဆုံးရှုံးမှု ...
HSK အကျိုးအမြတ် စာတို
အသင်းတော် / စီရင်စုနယ်
18/3: စနိုးမိုဘီလ်ဘုရားသခငျသညျTjänste ...
24/5: နွေရာသီ Premier ငါကို C ...
19/12: ရဲတပ်ဖွဲ့အဘို့ရပ်တန့် ...
19/12: Nordichallens ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးရွှေဘောလုံး ...
19/12: အခုတော့ Ortviksparken ...